Thenga i-Unisex Portable Fashion Daily Glasses Magnifier - Ukuthumela Kwamahhala Futhi Akukho Ntela | WoopShop®
Isikhulisi se-Unisex Portable Fashion Daily
Isikhulisi se-Unisex Portable Fashion Daily ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Isitayela: Ukugqoka isitayela
Ngokukhanya Noma Cha: Cha
Inombolo yesibonelo: P805125
Umthombo Wokukhanya: Akukho
Izinto: PC + Plastic
Izibuko ezikhulisayo zenza yonke into ibe nkulu futhi icace kusetshenziswa amalensi wokukhulisa angu-160%.
Izambatho zamehlo ezingakhuliswa ngezandla ngaphandle kokuhlanekezelwa ngokuphelele kwenza imisebenzi yansuku zonke ibe lula ukuyenza.
Gqoka kalula ngaphezulu kwezingilazi zodokotela, oxhumana nabo, noma izibuko zelanga.
Akukho ukuhlolwa kwamehlo noma imishanguzo edingekayo.
I-Flexible, engasindi, ozimele be-Unisex.
Khulisa nemininingwane emincane kakhulu nge-160% nge, izigqoko zamehlo ezingakhulumi ezingakusiza ubone izinto ezinkulu futhi zicace bha. Gqoka phezu kwezingilazi zakho kadokotela noma oxhumana nabo ukwenza konke kusuka ekuhluzeni izinaliti kuya ekufundeni ukuphrinta okuncane okuncane. I-Flexible futhi ilula, izibuko ezikhulisayo zikuvumela ukuthi ubone yonke into ngencazelo ephezulu ngaphandle kokuhlanekezela. Kwabesifazane nabesilisa.
Ama-1 PC Akhulisa Izibuko
I-oda lifike ngokushesha, lipakishwe kahle. Khulisa izibuko akukubi, ake sibone emsebenzini.
Izibuko ezikhulisayo zafika zigcwele kahle. Iyahambelana ngokuphelele nencazelo. Isebenziseka kalula ngemininingwane emincane. Ukulethwa okusheshayo, ngincoma izimpahla ⭐⭐⭐⭐⭐
Kuhle kakhulu! Konke kwafika kuphephile futhi kuzwakala. Ukwenyuka kwezinhlamvu ezihloniphekile, ezincane kumalebula e-Read kwaba lula kakhulu. Ukulethwa kufushane, kupakishwe ngokuphephile, ithrekhi ibilandelwa yonke indlela. Sibonga kakhulu esitolo!
Amaphuzu afika eMoscow ngokushesha okukhulu-izinsuku eziyi-18. Ukupakisha-isikhwama esinenkaba (kuyamangaza ukuthi zihlangane kanjani? Incazelo iyahambisana. Ama-Plastic Lens + 2,5 njengakuchazwa. Imisebenzi emincane ilungile.